I-ClickMeter: Ukulandela umkhondo we-Campaign, ukulandelela okuhambisanayo, nokulandelela ukuguqulwa Martech Zone
I-ClickMeter: Ukulandela umkhondo we-Campaign, Ukulandela Okuhambisanayo, kanye Nokulandelwa Kokuguqulwa
NgoLwesine, Agasti 13, 2020 NgoLwesine, Agasti 13, 2020 Douglas Karr
Ukulandelela umsebenzi wesixhumanisi kuvame, ngeshwa, ukucabanga ngemuva lapho izinkampani zakha imikhankaso, ziqapha ukulandela umkhondo kwesixhumanisi, noma zilinganisa ukuguqulwa. Ukuntuleka kwesiyalo ekuthuthukiseni nasekulandeleni izixhumanisi kungadala inqwaba yezinkinga ezansi nomfula ezikwenza kube nzima ukukala ukusebenza kuwo wonke ama-mediums neziteshi.
ChofozaMeter iyipulatifomu emaphakathi ene-API ehambisanayo enika amandla izinkampani, ama-ejensi, abakhangisi, nabashicileli ukwakha izinqubo ezungeze ukusebenzisa nokulinganisa amazinga abo wokuchofoza okuxhumanisa. Okunye kokusebenza okuyisisekelo abangakuthola kufaka phakathi ukulandelana kokuhambisana, ukulandelwa kokuguqulwa, ukulandelwa kwephikseli, imingcele emifushane ye-URL, ukuhlanganiswa kwesifinyezi se-Google URL, ukuhlanganiswa kwesifinyezo sebhizinisi le-Bitly, ukukhomba kwe-IP geo, ukuphathwa kwezixhumanisi ezinophawu, nokujikeleza kwesixhumanisi.
Xhumanisa ukuqondisa kabusha, amathrekhi, ukuqapha, nokubambisana
ChofozaMeter inezici ezingaphezu kwezingu-100 ezinhle:
Phinda uqondise kabushaIzici ze-s - redirection zifaka ukuqondiswa kabusha okuqondisiwe ngezwe, ulimi, uhlobo lwedivayisi, nohlobo lomsebenzisi. Ukuqondiswa kabusha kungahle kube okungahleliwe, okulandelanayo, kwesisindo, ngokuchofoza kokuqala, ukuchofoza okuphezulu, ukuchofoza okubala phansi, ukuvikelwa kwephasiwedi, ukuhlelwa kwesikhathi, i-SSL kanye ne-non-SSL, okunamandla, ukujikeleza kwe-IP, injini yokusesha enobungane, imingcele ye-URL, ukuxhumeka kokuxhumanisa, ukubethela kwe-URL , isihloko sekhasi, ukusulwa kokudluliswa, izinkomba ezingaziwa, izigaba zokuqala noma izizinda ezingaphansi, ukumakwa kwezixhumanisi, ukuhlanganiswa kwezixhumanisi, nokungeniswa kokuxhumanisa ngobuningi noma ukudala.
Ukulandelela Isixhumanisi - Izixhumanisi zingalandelwa isitembu sesikhathi, ikheli le-IP, izwe, isifunda, idolobha, inhlangano, ulimi, uhlobo lwesiphequluli, uhlobo lweplatifomu, iselula, uhlobo lwezivakashi, okuhlukile / okungajwayelekile, umthombo, amapharamitha wangokwezifiso, amagama angukhiye, nokuningi.
Ukulandela Ukulandela - Ukuguqulwa kungalandelelwa yingxenye yefaneli, amakhukhi okulungisekayo, ukuguqulwa okuningi, ama-ID womkhiqizo, amapharamitha wangokwezifiso, inani lokuguqulwa, inani lekhomishini, i-SSL noma i-non-SSL, izivivinyo ze-A / B, ubumfihlo be-UE, ukukhishwa kwe-IP, ukuxhumana okugaxekile kogaxekile, kanye Ama-URL womkhankaso we-Google Analytics UTM.
Xhumanisa Isixhumanisi - Ama-KPIs edeshibhodi, imibiko yokuthambekela, imibiko yomkhankaso, imibiko ye-pixel, ukuqhathanisa ukuguqulwa, ukuchofoza-ukusakaza, ukuchofoza okubalulwe, izikhathi, iziphequluli, amadolobha, izizwe, ama-ISPs, amapharamitha, imithombo, amagama angukhiye, amakheli e-IP, amazinga wokuguqulwa, amathegi, izilimi, imali futhi nokuningi.
Xhuma Ukubika - I-Excel exports (CSV), bika izinqamuleli, i-imeyili nezaziso zomsindo, imibiko enziwa ngezifiso (ilogo, indawo yesikhathi, imali nolimi).
Ukusebenzisana Kwesixhumanisi - Ukwabelana kwangasese, ukwabelana komphakathi, ukwabelana nge-imeyili, ukuphathwa kwama-akhawunti amancane, kanye nezixhumanisi zokungena ngemvume ngokuzenzakalela.
Ukuhlanganiswa Kwesixhumanisi - nge-Adwords, amanethiwekhi ahambisanayo, i-Google Analytics, i-Backpage, i-Chrome, i-Firefox, i-Megaphone, i-Rebrandly, i-Retargeting, i-Remarketing, i-Safari, i-Shopify ne-WordPress.
Development - izindawo zokugcina ze-API ezigcwele, imibhalo enemininingwane, imvelo ye-sandbox, okhiye be-API abaningi, nokubonisana kuyatholakala.
I-ClickMeter iletha kanjani inani
Ukudalulwa: Singabanxusa be- ChofozaMeter.
Tags: kokulandela kokuhambisanauchofozaukulandela ngomkhondo ukuguqulwaizibalo zokuxhumanisaukulandela ukulandelelaukuhlanganiswa kokulandela umkhondoukubika kokulandela ngomkhondo kokuxhumanisaiqondiswe kabusha ngezweiqondise kabusha ngohlobo lwedivayisiiqondiswe kabusha ngolimiuqondisa kabusha
Douglas Karr Thursday, August 13, 2020 Thursday, August 13, 2020
Douglas Karr ungumsunguli we Martech Zone kanye nochwepheshe owaziwayo wezinguquko zedijithali. UDoug uyi Isikhulumi Somphakathi Esisemqoka. Ungu-VP nomsunguli we Highbridge, inkampani egxile ekusizeni izinkampani zamabhizinisi ukuba ziguqule ngokwamanani futhi zikhulise ubuchwepheshe bazo bokutshala imali besebenzisa ubuchwepheshe beSalesforce. Usungule izindlela zokumaketha ezidijithali namasu womkhiqizo I-Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Webtrends, Futhi I-SmartFOCUS. UDouglas futhi ungumbhali we Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies futhi co-umbhali we Incwadi Engcono Yezebhizinisi.
Ungayifaka kanjani i-Influencer, i-Blogger, noma i-Journalist
Yakha noma Thenga? Ukuxazulula Izinkinga Zebhizinisi NgeSoftware Efanele